CHERRY FELT: DEGITAANKA, DARYEELKA, TARANTA - CHERRY
Ma taqaanaa? Shiinaha waa meesha uu ku dhashay ee dhaqanka. Warshadu waxay ku xiran tahay muuqaalkeeda waddamada yurubiyaanka ah ee ku yaala Michurin.
Cherry cherry: sharaxaad
Dhaqanku waxa uu magaciisa ku helay sababtoo ah naqshadda dabeecadda ee laanta, caleemaha iyo miraha, waxay la mid tahay dareemidda. Geeduhu waxay u koraan ugu badnaan 2.5-3 mitir. Buundada waxaa ku jira kiimikada dabiiciga ah, carbohydrates, fitamiinada kooxda B, PP, C. Waxay u bislaadaan 7-10 maalmood ka hor tan jeeriga joogtada ah, ha iskaga maydhin.
Dhaqanka waxaa badanaa la faafiyaa by gooyn xidid iyo diyaarinta hawada. On geedo of tubta, khudaar, tubta cherry, waxaad ku beeri kartaa cherry dareemay by indhaha ama jarida. Warshadda waxaa sidoo kale loo isticmaalaa xoojinta dhoobada, abuurista dabbaaldegga. Dhaqanka ugu weyn ee dhaqanku waa jilicsanaan, laakiin iyada oo ay uga mahadcelinayso manjooyin karti leh, nolosha dhirta ayaa kor loogu qaadi karaa 10 ilaa 20 sano. Sidaas darteed, cherry felted leedahay sharaxaad, in siyaabo badan oo la mid ah cherry caadiga ah.
Kordhay xaaladaha cherry sii kordhaya
Beeridda habboon ee jeeriga la dareemay waxaa sidoo kale ka mid ah xulashada goobta ku habboon ee iftiiminta. Fruiting badan, geed waxay u baahan tahay badan oo qorraxda, haddii kale berry ka yaryar, deformed, iyo ka dibna baaluq. Sidaa darteed, ma aha lagama maarmaan in lagu beero warshad ku taal hooska geedo kale.
Cherry chelt: waa maxay ciidda loogu talagalay goosashada hodan ah
Ka hor inta aan la beerin jeeriga la dareemay, waa lagama maarmaan in la doorto ciidda saxda ah ee loogu talagalay. Xulashada ugu wanaagsan waxay noqon laheyd iftiin (bacaadka, loamy), ciidda bacrin ah oo leh falcelin dhexdhexaad ah iyo dheecaan wanaagsan. Qoyaan xad dhaafka ah ee ciidda waxay dili karaan geedka. In dhulka acidic waxaa lagama maarmaan ah waqti ka waqti si loo sameeyo lime.
Wixii pereovleniya on goobta waa in la beeray dhowr noocyo ama geedo dhowr ah, taas oo ku xidhan sifooyinka kala duwan. Sidaa darteed, noocyada is-bacrin ah ee jiirarka dareemay waxaa ka mid ah Delight, Carruurta, Oriental, Beauty, Dream, Summer, Spark. Nattie, Alice, Autumn Virovka iyo kuwo kale.
Waa muhiim! Laguma talin in la beero jeeriga oo u dhow geedaha qulqulaya.
Beerto cherry beerto
Goorma ayaan ku dhejin karaa cherry dareemay
Geedka johannesört (geedo 1-2 sano jir ah) ayaa ugu wanaagsan ee la beeray guga hore, ka hor inta aan la gooyin. Waxa kale oo laga yaabaa in beerto la dareemay jeeriga dayrta, bisha Sebtembar. Noocyada iibsashada dambe, waxay u fiicantahay prikopat ilaa guga.
Sida loo diyaariyo ceel si ay u soo degaan
Qiyaasta ugu fiicnaanta ee ceelka loogu talagalay beeritaanka:
qoto dheer - 50 cm;
width - 60 cm.
Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo:
3 baaldiyo ee Bacriminta dabiiciga ah;
800 g oo lime ah;
Dhammaan qaybaha waa in lagu daadiyo hoosta godka oo si fiican isku walaaq.
Sida loo abuuro cherry dareemay
Xididdada seedling ka hor inta aan la beeriin waa in la googooyaa 20-25 cm oo si taxadar leh loona dhajiyo mashiinka dhoobo. Ku beeray qoto dheer oo isku mid ah oo dhirta koray markii hore.
Waa muhiim! Waa suurtagal in qotodheer qoto dheer oo qoto dheer qoorta geedka geedka gasho, sababtoo ah waxay ku dhiman doontaa kiiskan. Qoorta waa in aanay ka hoos marin 3-4 cm heerka heerka ciidda.
Ka dib markii la beero, dhulku si fiican ayuu u waraabiyaa, is adkeeyaa oo la googooyey bacriminta organic ama peat.
Noocyada daryeelka ee jiilaalka lagu khafiifiyey beerta
Daryeelidda ciidda waa shuruud u ah inay si guul leh u koraan dareemayaasha. Waxaa ka mid ah:
burburinta wakhtiga cawska, ka gaabinta geedka nafaqada;
marxalado dabacsan oo dhulka ah si loo xaqiijiyo socodka hawada iyo qoyaanka xididada. Isla markiiba isku day inaadan tagin wax ka badan 5 cm;
qoyaanka ciidda xilliyada qalalan.
Dharka ugu sarreeya iyo waraabinta
Quudinta ee jeeriga dareemay waxaa la samayn karaa isla markiiba ka dib markii ubax. Si arrintan loo sameeyo, wareegga geedka geed kasta wuxuu wax ku biiriyaa:
5-7 kg oo ah Bacriminta Biyaha;
70 g oo ah fosfooriga;
30 g oo ah nitrogen;
20 g of potash ah.
Shan sano oo shanta sano ah, ciidda hoosteeda geedka waa inay ahaato lime.
Guutul daruuriga ah ayaa lagu shubay haddii uu jiro xilliga sii kordhaya iyo abuuritaanka midhaha waxaa jira wax yar oo roobab ah. Qoyaanka xad dhaafka ah wuxuu dhaawici karaa nidaamka xididka dhirta wuxuuna saameyn karaa fruiting.
Iskuday manjooyin cherry
Geedka geedka la jarjarey ayaa ah habka ugu wanaagsan ee si haboon loo kordhiyo nolosha geedka iyo helitaanka goosashada qani ku ah.
Waxaa badanaa la qabtaa guga, ka hor inta muuqaalka kelyaha. Nidaamku wuxuu ku lugleeyaa saaridda:
laantii hore, oo aan midho badan soo bixin;
caleemo qallalan, daciif ah, caleemaha barafoobay;
Laamuhu waxay u xuub si qoto dheer u taajiraan;
Laamo dheeraad ah oo ka hortagaya midba midka kale si caadi ah u koraya.
Natiijo ahaan, gooyaa geedku waa inuu ahaado 10-12 oo keliya caleemaha ugu xoogan. The gaboobay duug ah, manjooyin qotodheer waxaa la fuliyaa, si tartiib ah u beddelaya lafaha hore ee geed leh laamo cusub. Isku laabid manjooyin cherry waa suurto geli kartaa dayrta, halka nidaamku uu yahay mid la mid ah sida guga. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagu dhammeeyaa nadiifinta caleemaha dhacday, ka soo bixidda laamaha harraaday. Dhammaan dhirta dhirta waa in la gubaa, maadaama ay ku sii jiri karaan jirooyinka.
In kasta oo xaqiiqda ah in dareemayaasha johannesört ay udub dhexaad u yihiin cudurada, waxaa jira cuduro soo weerari kara. Monilioz (gubasho monilial) waxaa sababa dhirta fungus ee ku dhuftay caleemaha pistil waxayna ugu dambayntii dhex galaan caleemaha. Caadiyan cudurku wuxuu isku dayaa in uu dareemo muddada ubax. Dhamaadka May, geedka iyo caleemuhu way engegaan. Xilliga cimilada, cudurku wuu ka soo reynaa marka uu qalalan yahay. For prophylaxis, waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo geedo leh fungicides (Fitosporin-M, Abigak-Peak, dareeraha Bordeaux). Caleemaha saamoobay waxay gooyeen. Cocomycosis waa cudur fungal ah oo keena in la nuujiyo hore ee caleenta. Sababtoo ah, wareegga dabiiciga ah ee cherry waa la jabsaday, difaacu waa la dhimay. La dagaallanka daaweynta cudurka ee caleemaha Bordeaux isku dar ah, daroogada "Horus". The cayayaanka ee jeeriga dareemay waxaa ka mid ah:
miro miro macaan.
Si looga ilaaliyo iyaga, guga ayaa u baahan in la raaco beerashada beeraha, oo ay ku jiraan burburinta caleemo dhacday, koonfureed oo looxyo, iyo sidoo kale quudinta saxda ah. Guga, waxaan kugula talin karnaa xayawaanka dhirta laga soo saaro ash ashyaada iyo waraabinta laamoodka leh diiran, tabar daran oo ah kiniinka potassium.
Kafaarin Cherry: Goynta
Saddex sano ka dib marka la beerto, cherry khatarta ah wuxuu bilaabmaa inuu midho u dhasho. Ilaa 4 kg oo miro ah ayaa laga goyn karaa hal geed. Dalagga dalaggu wuxuu dhirbaaxaa dhirta oo dhan isla markaa ama waqti gaaban. Midabka midhaha waxay kuxirantahay noocyada kala duwan - laga bilaabo pinkish ilaa guduud mugdi ah.
Haddii aad qorsheyneyso inaad ku qaadato jeeriga, waxaa fiican inaad soo qaado sida ugu dhakhsaha badan ee ay si buuxda u dhistaan ​​oo u noqdaan kuwo caan ku ah midabka bislaaday. Cherry cherry waa xulasho fiican oo loogu talagalay kuwa raba in ay ku koraan a warshad aan qabyo ahayn oo kaliya ma siinayo miraha caafimaad leh oo caafimaad leh, laakiin sidoo kale farxad isha leh caleenta jilicsan iyo ubax badan.
Ma taqaanaa? Berry ma u dulqaadanayo gaadiidka, sidaa daraadeed bay dhif u yihiin iibinta.